Xasillooni-darrada darawallada bajaajta xilliyada afurka | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Xasillooni-darrada darawallada bajaajta xilliyada afurka
Posted by: Sadia Nour April 11, 2022
Himilo – Marka la gaaro bisha Soon, waddooyinka Muqdisha waxaa ka yaraada sawaxanka iyo ciriiriga darran ee ka jira waqtiyada kale, sabab la xiriirta dhaqdhaqaaqa dadweynahada oo aanan xooganeyn.
Balse taasi baddelkeeda waxaa kordha xasillooni-darradda darawallada kaxeeya mooto bajaajta oo dadka caasimaddu ay aad u adeegsadaan.
Ma ahan waqti weliba, balse waa xilliyada uu soo dhaw yahay afurka, laga billaabo 05:00pm galabnimo illaa 06:30pm.
Mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata mootadaasi oo aan weydiinay sababta keeneysaa ayaa inoo sheegay iney tahay darawallada oo doonaya inay qaadaan rakaab badan kahor inta aanan la gaarin waqtiga afurka iyo qaarkood oo u afur tagaya degmooyin ka fog halka ay u wadaan macaamiilkooda.
Xasilooni-darradan waxaa waqtiyada qaar ka dhasha shil ay dad ku dhaawacmaan oo sababa qasaare maaliyadeed, sida horraantii soonka ka dhacday isgoyska zoobe, halkaasi oo laba mooto oo isku dhacday uu ku dhaawacmay mid ka mid ah darawallada shilka ku lug lahaa.
Marka laga soo tago shilalkaasi, waxaa xasilooni-darradaasi sababtaa khilaaf soo kala dhexgala macaamiilka iyo wadaha mooto bajaajta, kaasi oo ugu danbeyntii keena in macaamiilku isaga dego mootada.
Nasiib-darro, mushkiladan kuma koobna oo kaliyaha maalinkii ee xittaa waxey taagan tahay habeenkii si gaar ah xilliyadda Saxuurta, sida uu inoo sheegay mid ka mid ah darawallada kaxeeya mooto bajaajta.
Dadka qaarkood ayaa qaba in mushkiladan xal loo heli lahaa haddii laga heli lahaa wadooyinka caasimadda Muqdisho goobo si bilaasha ah looga afuro, tababarka ay heystaan wadayaasha mootadadan waa arrin kale oo xusid mudan.
Previous: Soonka u wanaagsan caafimaadka jirka iyo maskaxda
Next: Towerka London oo martigeliyay afur-wadareedkii ugu horreeyay